Daawo Sawirro: Maxey ka dhigan tahay Doorashada Guddoomiye Jawaari..?! - iftineducation.com
Daawo Sawirro: Maxey ka dhigan tahay Doorashada Guddoomiye Jawaari..?!
iftineducation.com – Maqaalkan waxaan ku falanqeynayaa aragtideyda ku aadan doorashada Guddoomiye Jawaare iyo waxa ay ka dhigantahay, sababaha sida aqlabiyada leh loogu doortay iyo siyaasadaha ku xeeran tartanka doorashada Baarlamaanka Soomaaliya.
Iyadoo arrimahaas siyaasadeed jireen ayaa haddana su’aasha la isweydiin karo ayaa ah maxaa keenay in Jawaari laga doorbido musharaxiinta kale ee Digil & Mirifle? Labo sabab ayaa ugu weyn oo keenay arrinkan, oo tan hore ay tahay Hormuudka isbedelka awood-qeybsiga jagooyinka sar-sare, waa Shariif Xasan Sheekh Aden oo xoogiisa isagu geeyey Qorshaha 1aad (Plan A) oo keliya kaas oo ahaa in Xidig la taageero, oo uu diiday Qorshe 2aad (Plan B), kaas oo noqon karay in shaqsi D&M ah lagu midoobo.
Waa dhab oo mar haddii uu aqbali lahaa plan B waxaa muuqatay inaysan macquul aheyn in Xidig uu heli lahaa codadkaas badan. Tan labaad ayaa aheyd Musharaxiinta xilka Madaxweyne oo u arkayey isbedel ku yimaada nidaamka awood qeybsiga aan qorneyn ay keeni karto inay saameyn toos ah iyo mid dadban keeni karto. Tusaale, waxaa adkaan lahaa in musharaxiinta qaar la oran lahaa Beeshaada Guddoomiye bey heleen. Tan arrinkan ka sii weyn ayaa aheyd mar haddii uu Xidig ku guuleysan lahaa xilka Guddoomiyenimo inay sahli laheyd in Musharax D&M ah loogu wada shubi lahaa doorashada xilka Madaxweyne si xildhibaanadu ay u tusaan bulshada in beelo gaar ah oo keliya aysan xaq u laheyn. Waxaa midoobi lahaa xildhibaanada ka careysan in Xidig noqdo Guddoomiye iyo xildhibaanada is oran karay mar haddii Beeshu aysan noqon karin Madaxweyne aan halkaasna isbedel ka sameyno.
War Deg Deg: Tirinta Codadka Doorashada Gudoomiye kuxigeenka 2-aad oo dhamaatay (Sida loo kala horeeyo )